Tsipy kanetibe: hotanterahina ny 10 avrily ny fifidianana federasiona | NewsMada
Tsipy kanetibe: hotanterahina ny 10 avrily ny fifidianana federasiona
Hiditra amin’ny fanavaozana ny mpitantana eo anivon’ireo ligy sy ny federasiona ny tontolon’ny tsipy kanetibe. Namoaka ny daty hanatontosana izany ny Federation du sport boule malagasy (FSBM), hisahana izany.
Hotanterahina, ny 10 avrily ho avy izao, ny fifidianana hitantana ny federasiona malagasin’ny tsipy kanetibe (FMP), ho an’ny taom-piasana manaraka. Io ny nambaran’Andrialemirovason Amiroudine Moez, filoha lefitry ny Federation du sport boule malagasy (FSBM), tamin’ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety, tetsy amin’ny Motel Anosy. Notsiahiviny fa efa tapitra ny volana septambra 2020 ny fe-potoam-piasan’izy ireo.
Tsy mbola voafaritra kosa ny toerana hanatontosana izany. Misokatra ho an’ny rehetra ny filatsahana ka anisan’ny mason-tsivana ny fanananana zom-pirenena malagasy ary olona manana kara-pilalaovana ao anatin’ny ekipa, niaraka tamin’ny FSBM, ka nandray anjara tamin’ireo fifaninanana sy hetsika rehetra nampanaoviny. Ho an’ireo handatsa-bato kosa, ireo filohana ligy niara-niasa tamin’ny FSBM no manan-jo hifidy.
Tsy hisy ny seksiona
Ny 27 marsa ho avy izao kosa ny fifidianana ho an’ny ligy ka tanterahina isam-paritra izany. Mitovy amin’ny fepetra, napetraka amin’ny fifidianana federasiona ihany ny an’ny ligy. Tsy hisy ny an’ny seksiona noho ny havitsian’ireo klioba tany amin’ny faritra niaraka amin’ny FSBM fa anjaran’izay ho filohan’ny federasiona ho avy eo ny manatanteraka izany. Efa tafapetraka ny alakamisy lasa teo, any amn’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena, ny lalam-pifidianana, izay tsy maintsy nakan-kevitra tany amin’ny federasiona iraisam-pirenena. Nomena dika mitovy ihany koa ny Komity olympika malagasy (Com). Misokatra, manomboka ny alatsinainy ho avy izao, ny fametrahana ny antontan-taratasy ho an’ireo hifaninana ka avantana any amin’ny filohan’ny FSBM, Andriamarohaja Dolys. Aorian’ny fandinihana ataon’ny FSBM, tsy maintsy alefa any amin’ny federasiona iraisam-pirenena ka ry zareo ny manome fankatoavana ho an’izay nahafeno fepetra. Tsiahivina fa tsy afaka milatsaka ireo olona nosazin’ny federasiona iraisam-pirenena.
Nolazain’i Amiroudine hatrany fa noho ny fanelanelanana nataon’ny FSBM, afaka avokoa ny sazy nahazo an’i Madagasikara, teo anivon’ny federasiona iraisam-pirenena sy ny federasiona frantsay ary ny Quaterback, ka afaka miverina ao anatin’ny fifaninanana indray ny Malagasy.